Ra'iisul-wasaaraha oo Booqday Dhadhaab. - Wargeyska Faafiye
Ra'iisul-wasaaraha oo Booqday Dhadhaab.
Ra’iisul-wasaaraha Somalia, Cabdiweli Sheekh Axmed iyo wafdi uu horkacayo ayaaa maanta booqasho saacaddo qaadatay ku tagay xeryaha Dhadhaab ee dalka Kenya oo ay ku jiraan in ku dhow 4 boqol oo kun oo qaxooti Soomaali ah.
Ra’iisul-wasaaraha oo noqonaya mas’uulkii ugu sareeryey ee dowladda Somalia ka socda ee booqda qaxootiga ayaa soo arkay xerada Ifo 1 iyo xaruun caafimaad iyo dugsi halkaasi ku taalla, wuxuuna la kulmay qaar kamid ah qaxootiga.
Wareysi uu siiyay VOA Ra’iisul-wasaare Cabdiweli ayuu kaga hadlay wixii uu Dhadhaab ku soo arkay.
Cabdiweli Sheekh oo noqonaya mas’uulkii ugu sareeyay ee dowladda Somalia ka socday oo booqda Dhadhaab ayaa booqashadiisu la xiriirtay u kuurgalida xaaladda Qaxootiga. Wareysi uu siiyay VOA, ayuu Ra’iisul-wasaare Caliweli wuxuu sheegay in qaxootiga uu ku soo arkay xeryaha Dhadhaab ay yihiin kuwa doonaya inay dalkii ku noqdaan.
Waraysiga oo dhamaystiran ka dhegayso qaybta hoose ee boggan.
Recent PostsBoqorka Sacuudiga oo wiilkiisa ka dhigay dhaxal sugeDaawo VIDEO : ‘Gaajo ayuu u dhintay wiil aan dhalay oo shan jir ahaa’Ahmed Kathrada, ninkii la xirnaan jiray Mandela, oo dhintayGeneral favors more aggressive approach in SomaliaUNHCR oo dalbatay baaritaan laagu sameeyay qaxootigii Soomaalida ee Yaman lagu laaayay.Editor’s Pick . Telefoonkii Hitler oo $243 kun oo dollar lagu iibsaday.43Random PostsMa Maqashay GUMEEYSTAHA Somalida Ku Nool Minneapolis BASIM Sabri ?Itoobiya oo Kismaayo doonaysa inay qabsatoCanada oo 22 sano ka dib safiir u Magacowday Soomaaliya.blast hits Nairobi's mainly Somali Eastleigh area.Xalka kaliya ee haray, waa in Baarlamaanka la kala diro sida uu qabo qodobka 67aad ee dastuurka KMG ah.